Ungayikhulisa kanjani intshebe: amathiphu okwenza ikhule ngamandla futhi iqine | Amadoda aSitayela
Indlela yokutshala intshebe
IsiJalimane Portillo | | Ukunakekelwa komuntu siqu
Impela uke wacabanga ngokukhulisa intshebe ngoba ungumuntu othanda kakhulu. Kunezifundo eziningi nobufakazi bangempela obuvela ezinkulungwaneni zabesifazane abathi indoda enentshebe inyusa isikhalazo sobulili kakhulu nokuthi yenza izingubo nezitayela zesimanje kakhulu zihlangane kahle. Kodwa-ke, akufanelekile ukutshala noma yiluphi uhlobo lwentshebe olunjalo noma ukwenza i-botch yangempela. Ukuze wazi ukuthi unentshebe kanjani kumele ube nesitayela nolwazi ngakho.
Kulokhu okuthunyelwe sizokufundisa indlela yokutshala intshebe ukuze ukwazi ukuyijabulela kahle futhi ikusize ukhuphule isitayela sakho futhi ubukeke muhle ngokwengeziwe. Ngabe ufuna ukufunda ngakho? Qhubeka ufunde.
1 Izici zentshebe enhle
2 Ukuzibophezela entshebeni yakho
3 Ukunakekelwa okuvamile
4 Vumela intshebe ikhule ngenkathi unakekela isikhumba sakho
Izici zentshebe enhle
Njengoba ngishilo ngaphambili, akufanelekile ukutshala noma yiluphi uhlobo lwentshebe njengaleyo. Kufanele ucabangele ezinye izici ngaphambili. Okokuqala ubukhulu bentshebe ofuna ukuyikhulisa. Kukhona labo abashiya izintshebe zabo zinde kakhulu ngesitayela sabantu abagawula izingodo kanti abanye ngokumane nje bashube futhi basikwe kahle futhi babukeke bebahle kakhulu.
Ngokuya ngesitayela sezingubo ojwayele ukuzigqoka, olunye uhlobo lwentshebe lufaneleka kakhulu kunolunye. Njengoba uyohlola, Uzobona ukuthi yisiphi isitayela sentshebe esikufanela kakhulu. Kwesinye isikhathi uma uqala ukukhulisa intshebe uqala ukubona ukuthi ulunywa kanjani futhi kwesinye isikhathi kungakhathaza futhi kungabekezeleleki. Inkwethu ingabonakala nasesilevini nakuso sonke isikhumba sekhanda.
Futhi lokho ukukhombisa intshebe enhle nawe kufanele wazi ukuthi ungayikhulisa kanjani. Ngokulandelayo sizokukhombisa amanye amathiphu namasu athakazelisa kakhulu okuthi, uma ulandela le ncwadi, ngingakuqinisekisa ukuthi uzoba nentshebe efiseleka ngamadoda amaningi futhi eheha abesifazane abaningi.
Ukuzibophezela entshebeni yakho
Lapho uthatha isinqumo sokutshala intshebe, kufanele ukhumbule ukuthi uzodlula ezigabeni ezithile lapho ungahle ungathandi ukubukeka kwakho noma kufanele uhlupheke kancane. Ekuqaleni kuvamile ukuthi, lapho izinwele ziqala ukuqina ngemuva kokushefa kwakamuva, qala ukunwaya intshebe yakho. Ungazizwa uxakile ngezinwele ezingaka ebusweni bakho futhi ungavila ukuzisika.
Elinye lamaphutha enziwa amadoda amaningi lapho kukhula intshebe ukucabanga ukuthi ukushefa nokucheba sekuphelile. Akukho okunye okuvela eqinisweni. Ezimweni eziningi, ukunakekela intshebe kubiza kakhulu kunokuyigunda ngokuphelele. Futhi ukuthi ukuyisika kahle futhi "ukuyithena" nakho kunomsebenzi wayo. Kufanele ube nokubekezela nokubekezela ukuze ulungise kahle imiphetho, ubukhulu, njll.
Kukho konke lokhu, zibophezele ekukhuleni kwentshebe yakho. Intshebe yakho ngeke ikhule ngokuphazima kweso. Ngakho-ke, uma ufuna ukuthi intshebe yakho ikhule, qiniseka ukuthi ukucabanga ukuthi uzoba nezigaba ongazithandi kangako umqondo omuhle kakhulu.
Uma sikhuluma ngokukhulisa intshebe, asikhulumi ngokuyinakekela kuphela, kodwa nokunakekela umzimba wethu wonke. Impilo yentshebe yethu ixhunyaniswe nayo yonke impilo yomzimba jikelele. Ngakho-ke, kubalulekile ukunakekela impilo yakho jikelele.
Kunezinto ezithile ezingasisiza sikhule kangcono nentshebe enempilo. Lezi zeluleko yilezi:
Ukuzivocavoca Yebo, yize kungabonakala kungenjalo, uma sisebenzisa umzimba sithuthukisa ukujikeleza kwegazi lethu ngokujwayelekile. Igazi lizohamba kangcono emzimbeni wethu futhi lizofinyelela esikhunjeni sobuso kangcono. Yile ndlela intshebe ezokhula ngayo ibe nempilo futhi ngobuningi bayo.
Enye into okufanele icatshangelwe ukuphumula. Ngesikhathi sokulala, iningi lokuvuselelwa kwamaseli kwenzeka. Yilapho inqubo yokukhula kwentshebe inkulu kakhulu. Ngakho-ke, ukuphumula okuhle kuzosenza sibe nezinga eliphakeme lokukhula kwentshebe ngezikhathi eziningi zobusuku.
Ngenxa yengcindezi. Ingcindezi ayiholeli kuphela ekukhuleni kwezinwele kancane, kepha iba nempilo encane futhi igcine ngokuwa. Kuyadabukisa ukuthi intshebe yakho ayikwazi ukuminyana ngenxa yengcindezi.
Ukudla okunempilo. Sebenzisa futhi ube nokukhula okuhle kwentshebe yakho njengezaba zokuyisa ukudla kwakho ohlangothini olunempilo. Ngaphezu kokuthuthukisa impilo yonke, ungahlanganisa okunye ukudla okunothile kwezakhamzimba bese ukhohlwa ngokudla okusheshayo noma okugcwele amakhalori angenalutho. Ekudleni singafaka okuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni anempilo njengenkukhu, inhlanzi, amaqanda, iyogathi, ushizi nobisi. Kuyathakazelisa futhi ukubeka ezinye imbewu namantongomane afana nama-alimondi, ama-hazelnuts nembewu yefilakisi. Ngokuvamile kwandisa ukusetshenziswa kwezithelo nemifino.
Vumela intshebe ikhule ngenkathi unakekela isikhumba sakho
Uma uyeka ukushefa, ungahle ulingeke ekuqaleni ukuthi ufune ukugunda intshebe yakho emasontweni ambalwa okuqala ukuyibumba. Noma kunjalo, uma wenza lokhu uzobe uswenza buthaka. Bamba amaviki angu-4-6 ukuze izinwele zithambe futhi sikwazi ukuzilolonga.
Njengoba ngishilo ngaphambili, kungenzeka ukuthi inhlanzeko engeyinhle ikwenza ube nezinkabi entshebeni yakho futhi lokho kubi kakhulu. Njengoba ukulunywa okuyinhloko kuyikhathaza kakhulu, kufanele kwenziwe okuthile ukukususa. Ukulunywa kuvela ngoba izinwele zikhula ngokushesha okukhulu futhi ziqine esikhunjeni futhi kulapho-ke lapho kufanele ugeze isikhumba ukuqeda ukungcola namagciwane. Le yindlela esenza ngayo umkhuba wenhlanzeko ukuze sibe nentshebe ehlanzekile. Kumele sikhumbule ukuthi ukutshala intshebe akufani nokunganaki.
Ungasiza intshebe yakho ukuthi ikhule ngokwakhiwa kwamafutha okubalulekile okusiza nokuthambisa isikhumba. Lapho intshebe inobude obukhulu, kufanele uqale ukuyixubha. Lapho uqhubeka uyixubha, kulapho ungazithambisa khona izinwele zakho ukuze zikhule ziqonde lapho ufuna khona futhi zingakhuzeki. Kubalulekile ukuvala zonke izikhala esinazo ukukhombisa intshebe iphilile ngangokunokwenzeka.
Ngiyethemba ukuthi ngalezi zeluleko wazi ukuthi ungazikhulisa kanjani intshebe ngendlela engcono kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Indlela yokutshala intshebe
Amakha amahle kakhulu abesilisa
Izinhlobo zomzimba wamadoda